Ny fikaon-tsoto kely dia fomba iray hanasongadinana io tarehimarika io. Ity akanjo tsara tarehy ity dia nahasarika zazavavy nandritra ny fotoana lava, satria fohy fohy no manantitrantitra ny halavany sy ny fahalemen'ny tongotra, ary amin'ny fotoana mitovy tanteraka amin'ny akanjo hafa.
Ny akanjo fohy fohy ho an'ny vehivavy dia mety amin'ny fomba amam-panao an-tanàn-dehibe na amam-pitiavana: ny vokatra azo dia miankina amin'ny accessories, kitapo, kiraro ary mazava ho azy, ny ambony (ohatra, na T-shirt misy tsipika mampihomehy na blouse miaraka amin'ny hazom-borona).
Kely fohy: mifidy akanjo mifanaraka amin'ny karazany
Ny sary mahomby dia tsy miankina amin'ny fahalavoana na ny loko. Zava-dehibe ny hanatsarana ireo tarehimarika ireo, ary manantitrantitra ny fahamendrehany. Noho izany, mba hisafidy ny shorts, mila aloha ianao, mifototra amin'ny karazan-tarehinao, ary avy eo manombatombana raha tianao na tsy tianao ilay zavatra.
Vehivavy mini-shorts. Karatra fohy fohy - safidy tsara amin'ny ankizivavy be herim-po izay afaka maneho ny hatsarany. Mazava ho azy, tsy azo tratrarina amin'ny fitrandrahana ofisialy na asa ny sokajy, saingy mety amin'ny fotoana manokana izany. Voalohany sy amin'ny ankapobeny, ny toeram-pivarotan-tsakafo kely dia mety amin'ny tovovavy matevina, ary ny tsy fitoviana na ny sakan'ny havokavoka dia tsy zava-dehibe. Hetsi-panoheran'olom-bolo no hanitatra ny tongotra, ary hifantoka amin'izy ireo, hany ka tokony ho tonga lafatra io ampahany amin'ny vatany io.
Karazana fehiloha misy tavy ambony. Ny tavy ambony dia mifanentana amin'ny ankizivavy manana elatra lava izay misy tavy matevina, satria tena manintona izy amin'izany fomba izany. Ny fikarakarana ireo sokajy ireo, ilaina ny mijery, na ny tongotra dia tsy fohy loatra, satria ao anatin'io vahaolana io dia fohy izy ireny. Fa ity olana ity dia mora voavaha amin'ny fanampian'ny sehatra avo iray na volon'ondry.
Short shorts short. Manana lava lava kokoa ny shorts raha oharina amin'ny mini, ary noho izany dia manerana izao tontolo izao: mety ho karazana figadrana izy ireo, ary matetika no atao amin'ny denim. Ny ankizivavy ankizivavy dia afaka manao izany fihetsika izany raha mipetraka malalaka kely izy ireo.
Kely fohy fohy. Androany dia safidy malaza: ny shorts dia mitovy amin'ny akanjo, satria manana tongony maro. Afaka ny safidy fara-tampony izy ireo rehefa sarotra be ny milaza na kiraro na shorts. Saingy ny karazana pataloha dia mitovy amin'ny karazam-bolo, raha kely dia mihamaloka kely fotsiny ny tongotra. Ity fomba ity dia tsara indrindra ny misafidy ny ankizivavy miaraka amin'ny tarehimarika feno, satria ny halavan'ny havia dia hampihena tsara ny habetsaky ny tongotra.
Ny fehin-kely fohy dia mifamatotra amin'ny zavatra maro, ary mora kokoa ny mamaritra izay tsy tokony hatao. Na dia eo aza ny karazana sary dia misy ireo karazana hafa izay azo raisina ho fiovaovana mahomby kokoa.
Ohatra, ny ampakarina dia ampahany manan-danja eo amin'ny tanora sy ny fomba tsy mahazatra. Ny tranon'ny tanàna dia feno fampiononana sy fahatsorana, ary ny fehiloha fohy dia mampifandray ireo singa roa ireo. Ho fanatrehana ny oniversite, afaka manao ny lobaka fotsy sy kiraro amin'ny vehivavy ianao , raha ao anatin'ny fitsipika demokratika manokana momba ny akanjo fitafy.
Ny fanaovana akanjo jiro sy akanjo fohy, dia afaka mandeha miasa ianao raha toa ny tara-pahazavany na tara-pahatapahana tsy misy filaminana.
Raha misy kiraro miaraka amin'ny akanjom-behivavy tsara tarehy , izay misy karazana loko marobe na taratasy mivalona, ​​dia afaka mamorona sary mampihetsi-po ho an'ny mandeha amin'ny hariva.
Ny safidy ny lantihy loko dia miankina amin'ny safidy manokana, fa koa amin'ny lanjan'ny fitaovana rehetra. Ohatra, ny shorts mainty fohy indrindra no malaza indrindra satria manamboatra tarehimarika izy ireo ary mifanaraka tsara amin'ny loko hafa. Izany no safidy indrindra, raha ny tavy, fa tsy shorts hoditra.
Kely fotsifotsy fohy dia safidy mamirapiratra mamirapiratra, izay tsy misy afa-tsy amin'ny loko sy ny loko mazava: beige, mavo, maitso maitso, manga.
Akanjo fampakaram-bady ho an'ny zazavavy
Fomba hisafidianana akanjo volom-borona: toro-hevitra sy fitsipika
Kapaoty misy sary - inona no tokony harahina sy ny fomba hamoronana lamaody?
Kiraro espaniola amin'ny teny abarcas
Karazan-damba ataon'ny vehivavy
Black jacket - amin'ny akanjo sy ny fomba hamoronana sary hoso-doko?
Herinandro maherin'ny 18 herinandro - inona no mitranga?
Dresses tsara tarehy 2014
Trondro ho an'ny ankizy
Panthenol avy amin'ny filentehan'ny masoandro
Ahoana ny fametrahana metabolista?
Mametraka varavarankely fanitso plastika
Antibiotika amin'ny fihetsiketseham-panazavana marobe ao amin'ny takelaka - ny lisitra
Ny toetra sy ny tontolo iainana sosialy
Ahoana ny tokony hametrahana tsora-kazo?
Hiantsena any Budapest
Ahoana ny fanehoana ny tsipika fanjonona eo amin'ny volon'ny trimmer?
Takona rindrina amin'ny tanana manokana
Tokony hanantena ny fampakarambady an'i Phoebe Tonkin sy i Paul Wesley aho?
Edema Quincke - fitsaboana